4 Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang - Muasalebang
4 Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang
Đang Đọc: 4 Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Muasalebang in Muasalebang
Ezinyangeni eziyisi-8 ezedlule –
Indlela yokupheka inyama yenkomo eboshiwe imifino ilula kakhulu, iyashesha ngaphandle kokulungiselela izithako eziningi noma ukwazi ukwenza kanjani. Ake sihlole no-Nguyen Kim manje indlela ukupheka inyama yenkomo braised imifino okumnandi, ukonga ekhaya esihlokweni esilandelayo!
1 Ungayipheka kanjani inyama yenkomo egayiwe yemifino ngenyama yenkomo esikiwe yemifino
1.1 Ukulungiselela izithako
1.2 Izinyathelo zokupheka umhluzi wenyama yenkomo
2 Ungayipheka kanjani inyama yenkomo eboshiwe nge-ky tofu ne-tofu emhlophe
2.1 Ukulungiselela izithako
3 Indlela yokupheka inyama yenkomo eboshwe ngemifino ngezimbambo zemifino
3.1 Ukulungiselela izithako
4 Indlela yokupheka isobho elimnandi lenyama yenkomo eboshwe ngemifino
4.1 Ukulungiselela izithako
5 Amanothi endlela yokupheka inyama yenkomo eboshiwe emnandi yemifino
6 Imibuzo evame ukubuzwa lapho upheka inyama yenkomo eboshiwe yemifino ekhaya
6.1 Yiziphi izithako ezidingekayo ukupheka umhluzi wenkomo yemifino?
6.2 Yini emnandi ngenyama yenkomo eboshwe ngemifino?
Ungayipheka kanjani inyama yenkomo egayiwe yemifino ngenyama yenkomo esikiwe yemifino
Izingcezu zenyama yenkomo ezisadla imifino ziyizithako ezijwayelekile zokwenza izitsha ezimnandi zemifino. Ungazithola ezitolo kalula futhi usebenzise indlela ukupheka inyama yenkomo braised imifino kusuka kunyama yenkomo eyisikiwe ekhethekile yemifino.
– 100g izingcezu zenyama yenkomo
– Iphakethe elingu-1 lesinongo senyama yenkomo eboshiwe
– Imbiza engu-1 yesoso yenyama yenkomo ethosiwe
– 100g tofu emhlophe, 100g ky tofu
– 100g amakhowe ethanga, 100g shiitake amakhowe
– 200 g izaqathe
– 50 g ubhontshisi
– 1 ilitha lamanzi ahlanzekile kakhukhunathi
– 20g coriander, 20g lemongrass, 3g chili fresh
Ithuluzi: Ibhodwe, Ipani elinganamatheli, Umbese,…
Izinyathelo zokupheka umhluzi wenyama yenkomo
Isinyathelo 1: Gcoba inyama yenkomo esikiwe imizuzu eyi-15, bese uyikhipha bese ufaka kuyo iphakethe elingu-½ lempushana yesinongo yenyama yenkomo. Ngesikhathi esifanayo, ubeka amakhowe e-shiitake endishini, wengeze u-2g kasawoti bese uthela emanzini ahlungiwe ukuze ucwilise amakhowe imizuzu engu-15.
Isinyathelo sesi-2: Usika i-ky tofu, i-tofu emhlophe ibe yizicucu bese usebenzisa ummese ukuze wenze uphawu phezulu kwekhowe le-shiitake. Ngokuqondene namathanga enkukhu, ubuye usike uphawu lokuphindaphinda phezulu kwekhowe bese usika umzimba wamakhowe. Ngaphezu kwalokho, uletha izaqathe ezisikiwe, izimbali ezisikiwe (uma uthanda).
Isinyathelo sesi-3: Uqhubeka nokulungisa umhluzi ngokufaka isipuni esingu-1 samafutha okupheka ebhodweni, u-anyanisi u-anyanisi uhlanganise ne-lemongrass kanye ne-chili kuze kube yiphunga elimnandi. Okulandelayo, ugoqa-gazinga inyama yenkomo egayiwe yemifino imizuzu emi-2 bese uthela ilitha elingu-1 lamanzi kakhukhunathi + 1 litre lamanzi ahlungiwe ebhodweni.
Isinyathelo sesi-4: Ungeza izaqathi kanye nephakethe elingu-½ elisele lempushana yesinongo yenyama yenkomo. Bese ufaka ½ ithisipuni kasawoti, izipuni ezi-3 zikashukela, nezipuni ezimbili zesinongo semifino. Uma uthola ukunambitheka akwanele, mane ukunambitha ukuze ivumelane ukunambitheka kwakho.
Isinyathelo sesi-5: Faka amakhowe e-shiitake, amathanga enkukhu, i-ky tofu, uphizi (obilisiwe), i-tofu emhlophe, ne-cilantro ebhodweni. Qhubeka ukupheka kuze kubile, bese ufaka 2 wezipuni zamafutha enyama yenkomo.
Isinyathelo sesi-6: Pheka eminye imizuzu emi-5, bese ufaka u-20g wesitashi se-tapioca kanye no-30ml wamanzi ukuze udale ukufana kwebhodwe lesitoko senyama yenkomo.
Isinyathelo sesi-7: Pheka kuze kube yilapho ibhodwe libila, bese ucisha ukushisa, ukhiphe inyama yenkomo egaywe ngemifino uyifake endishini futhi ujabulele inyama yenkomo egaywe ngemifino. Ungayiphakela ngesinkwa ozikhethele sona.
Ungayipheka kanjani inyama yenkomo eboshiwe nge-ky tofu ne-tofu emhlophe
Indlela yokupheka inyama yenkomo eboshiwe imifino Into elandelayo okufanele uzame ukusebenzisa i-ky tofu ne-tofu emhlophe njengezithako eziyinhloko. Inqubo ilula kakhulu futhi iyashesha.
– Ucezu olu-1 lwe-tofu emhlophe, i-100g ye-tofu enesiqu esithambile
– 30 g amakhowe e-shiitake
– 30 g we-peas
– 200 g amazambane, izaqathe
– 700ml amanzi ahlanzekile kakhukhunathi
– I-Coriander, isinamoni, i-chives, i-lemongrass, uphondo lwe-chili
Ithuluzi: Ibhodwe lensimbi engagqwali, Ipani, Umbese,…
Isinyathelo 1: Okokuqala, uhlanza amakhowe e-shiitake emanzini abilayo cishe imizuzu eyi-10, bese usika imilenze bese uyisika phakathi. Lungiselela izaqathe namazambane zibe ama-cubes amancane, ne-tofu emhlophe, uthathe izikwele. Ngaphandle kwalokho, uphihliza i-lemongrass, usike i-lemongrass kanye nopelepele wezimpondo.
Isinyathelo sesi-2: Upheka u-anyanisi nge-lemongrass yomhlabathi kanye ne-chili, bese ufaka izaqathi namazambane ebhodweni. Govuza isikhashana bese wengeza izipuni ezi-2 zempushana yesinongo yenkomo eboshiwe, izipuni ezimbili ze-satay. Qhubeka upheka phezu kokushisa okuphansi kuze kube yilapho ingxube ibomvu.
Isinyathelo sesi-3: Faka ebhodweni u-700ml wamanzi ahlanzekile kakhukhunathi, i-lemongrass namakhowe e-shiitake. Kufanele wengeze ½ isipuni sikasawoti, 1 isipuni se-MSG, 1.5 wezipuni zikashukela, 2.5 wezipuni zesinongo semifino. Ngaphezu kwalokho, ungashintsha isilinganiso sezinongo, isithokelo ukunambitha.
Isinyathelo sesi-4: Uqhubeka ubilisa ngokushisa okuphezulu imizuzu emi-5 bese wengeza i-ky tofu, i-tofu emhlophe, nophizi. Uma isanda kuphekwa, thela isitashi se-tapioca esihlanjululwe ukuze udale ukuvumelana.
Isinyathelo sesi-5: Pheka kuze kuphekwe ngokugcwele, bese uvala ukushisa, engeza i-coriander, isinamoni ukuze udale iphunga.
Isinyathelo sesi-6: Ukha inyama yenkomo egaywe ngemifino endishini, engeza upelepele omncane futhi ujabulele nesinkwa.
Indlela yokupheka inyama yenkomo eboshwe ngemifino ngezimbambo zemifino
Ngaphandle kwenyama yenkomo esikiwe yemifino, izimbambo ezimfishane zemifino nazo ziyizithako ongazisebenzisa ukupheka inyama yenkomo eboswe ngemifino emnandi ngesinkwa. Indlela yokupheka inyama yenkomo eboshiwe imifino nge-vegetarian tenderloin yenziwa ngokulandela izinyathelo ezilandelayo:
– 150 g izimbambo zemifino
– 100g ubhatata, 1 isanqante
– 15g i-turmeric egayiwe, i-lemongrass egayiwe engu-10, i-ginger egayiwe engu-5 g
– 20g satay, 20g amafutha okupheka, 12g usawoti
– 34g ushukela rock, 15g isobho powder
– 35 amagremu kafulawa wetapioca, 15g imajarini
– 10g horn chili, 3g chilili eyingozi
Ithuluzi: Isitofu segesi, Isethi yebhodwe lensimbi engagqwali,…
Isinyathelo 1: Ufaka u-20g wamafutha okupheka ebhodweni bese wengeza ijinja, i-satay, i-lemongrass, ne-turmeric egayiwe epanini, bese ufaka amalitha angu-1.2 amanzi ahlungiwe ukuze ubilise. Ngesikhathi esifanayo, uxuba usawoti ongu-12g, ushukela we-rock ongu-34g kanye nempushana yesobho engu-15g bese uthela ingxube ebhodweni lomhluzi wokupheka.
Isinyathelo sesi-2: Ukulungiswa kokuqala kwezithako ezisele: amakhowe ethanga lenkukhu, izaqathe ezisikiwe, ama-chips amazambane, ahlutshiwe futhi anqunywe phakathi. Ngenkathi izimbambo ezincane ziyimifino, zicwilise emanzini afudumele imizuzu engu-20, bese uzikhama bese uzisika zibe izingcezu ezincane.
Isinyathelo sesi-3: Uthosa amazambane, bese uwafaka ebhodweni lomhluzi namagatsha ambalwa we-lemongrass (ephihliziwe) bese uvala isembozo.
Isinyathelo sesi-4: Amathanga enkukhu ethosiwe ngaphambili, izimbambo zemifino, bese uzikhipha ukuze zome. Ngesikhathi esifanayo, ulungisa inkomishi ehlanzekile futhi uhlanganise no-20g we-ketchup, u-20g we-chili sauce, u-50g wobisi lukakhukhunathi, u-0.5g wezinongo ezinhlanu eziyimpushana, ⅓ isipuni sempushana yombala wezitini zezimfanzi. Ukuhlanganisa konke bese ufaka ebhodweni lomhluzi ukuze udale umbala ocebile.
Isinyathelo sesi-5: Lapho ibhodwe lamanzi libila kakhulu, uthele amakhowe nezimbambo ezincane ebhodweni, engeza u-50g wamanzi no-35g wesitashi se-tapioca. Govuza kahle ukuze udale unama.
Isinyathelo sesi-6: Phakathi naleso sikhathi, uqhubeka nokuhlanza u-50g kasawoti ogqamile kanye no-10g wepelepele enezimpondo, u-3g wepelepele eyingozi bese ukuletha konke. Yilokho kuphela, unesitsha esikhangayo senyama yenkomo eboshwe ngemifino enosawoti kanye nopelepele.
Isinyathelo sesi-7: Bilisa umhluzi eminye imizuzu embalwa bese uvala ukushisa. Manje, udinga nje ukukha inyama yenkomo eboshiwe endishini, ufafaze amaqabunga e-coriander futhi uphake nesinkwa.
Indlela yokupheka isobho elimnandi lenyama yenkomo eboshwe ngemifino
Eyodwa indlela ukupheka inyama yenkomo braised imifino Kumnandi kakhulu ukupheka ngama-noodle aqinile, awongayo futhi ahlinzeka ngomsoco owanele womzimba. Izithako zokupheka isobho le-noodle yemifino Ngokulandelayo:
– 300 amagremu ama-noodle ahlafunwayo
– 200 g amakhowe ama-straw
– 3 izingcezu tofu
– 2 izaqathe, 200g izaqathe ezichotshoziwe
– 500g impande yomdumbula, 100g anyanisi onsomi
– Lungiselela ulamula owengeziwe, upelepele, ukhari, amaqabunga e-pandan, amahlumela kabhontshisi, isinamoni, i-coriander, uwoyela we-cashew
Ithuluzi: Ikhishi le-infraredamabhodwe, amapani,…
Isinyathelo 1: Thatha ibhodwe lamanzi ulethe izimpande zomdumbula kanye nezaqathi ebhodweni lesitshulu imizuzu engama-30 – ihora elingu-1 ukwenza amanzi abemnandi, bese usebenzisa isisefo ukuze ususe izidumbu zezaqathi nezimpande zomdumbula. Ngaleso sikhathi, uletha ama-noodle ukuthi abiliswe emanzini abilayo bese uwakhipha.
Isinyathelo sesi-2: Sika imilenze yamakhowe bese uyicwilisa emanzini anosawoti axubile imizuzu embalwa. Bese ukhipha amakhowe uwageze.
Isinyathelo sesi-3: Letha i-tofu ethosiwe kuze kube nsundu yegolide, uyeke ipholile, bese usika izingcezu ezincane eziwunxande, cishe u-3cm ubukhulu. Ngesikhathi esifanayo, ugeza izaqathe, uzihlube bese uzisika zibe yizicucu 4. Sika zibe izingcezu ezincane noma usike izimbali ngendlela othanda ngayo. U-anyanisi obomvu uqotshwe kahle.
Isinyathelo sesi-4: Thatha ipani lamafutha, ulilinde libilise, bese ufaka ama-shallots agayiwe bese ulithosa kuze kube yiphunga elimnandi. Bese, ufaka izithako ezinjengamakhowe, i-tofu, izaqathe, i-curry powder, amaqabunga e-pandan bese ugoqa-gazinga cishe imizuzu eyi-10, inkathi yokunambitha bese ucisha ukushisa.
Isinyathelo sesi-5: Enyakatho esitofini, umhluzi usuhluze izaqathi nezimpande zomdumbula, wabe usuyoliswa ngezinongo. Bese ufaka ingxube yezithako ezithosiwe bese ubilisa futhi, ufaka isinongo ukuze ubone ukuthi kudliwe nje. Ekugcineni, 2 wezipuni zamafutha e-cashew ukuze udale umbala omuhle womhluzi wemifino. Lapho ibhodwe lomhluzi libilisa futhi, cisha isitofu.
Isinyathelo sesi-6: Faka ama-noodle abilisiwe endishini bese ufaka umhluzi. Ngakho usuqedile isobho lenyama yenkomo yenkomo eshisayo.
Amanothi endlela yokupheka inyama yenkomo eboshiwe emnandi yemifino
Kuya indlela ukupheka inyama yenkomo braised imifino ukunambitheka, okumnandi, udinga ukuqaphela izinto ezimbalwa kanje:
– Hlola isimo sezithako ngaphambi kokupheka, qiniseka ukuthi inyama yenkomo yemifino ne-tofu kusha futhi akunawo umuhlwa.
– Uma ukhetha izithelo nemifino, kufanele ukhethe izithelo nemifino emisha eneziqu eziluhlaza.
– Ngesikhathi sokupheka, kufanele ugcine umlilo uphansi ukuze izithako zithambe futhi zingashi. Ngesikhathi esifanayo, izithako ezinzima zifakwa kuqala, futhi izithako eziphekwe ngokushesha zifakwa kamuva.
Ngaphezu kwalokho, kufanele futhi unake ukugcoba i-foam ngesikhathi sokupheka ukuze umhluzi ube musha.
Ngenhla ngu-4 indlela ukupheka inyama yenkomo braised imifino ukonga, okulungiselelwe okumnandi u-Nguyen Kim afuna ukwabelana nawe ngakho. Ngethemba ukuthi lezi zindlela zokupheka ezingenhla ezi-4 zizoshintsha umbono wokuthi ukudla kwemifino akumnandi futhi kukhangayo ngokudla okusawoti. Ngokushesha engeza isidlo kumenyu yakho yemifino ngoSuku Lwenyanga Egcwele!
Uma ufuna ukuthintwa okwengeziwe mayelana nemikhiqizo Yekhaya etholakalayo njengamanje kwa-Nguyen Kim, sicela usithinte ngokushesha ngokusebenzisa iziteshi ezilandelayo ukuze uthole ukwesekwa okusheshayo:
Imibuzo evame ukubuzwa lapho upheka inyama yenkomo eboshiwe yemifino ekhaya
Yiziphi izithako ezidingekayo ukupheka umhluzi wenkomo yemifino?
Sawubona bangane, ukupheka isobho elimnandi le-noodle yemifino, kufanele ulungiselele: amakhowe (dong co, izinaliti, amathanga enkukhu,…), ama-noodle, i-tofu ky,… Ngaphezu kwalokho, ama-tubers Ukholifulawa, izaqathe, amapheya, ama-apula futhi izithako zokwenza umhluzi ube mnandi ngokwemvelo. Uma ufuna umhluzi ube nephunga elimnandi, uwubeke ku-anyanisi omhlophe othosiwe, satay.
Yini emnandi ngenyama yenkomo eboshwe ngemifino?
Sanibonani bangane, inyama yenkomo egaywe ngemifino nesinkwa, ama-noodle nama-noodle amaqanda izoba mnandi kakhulu. Kodwa-ke, lapho udla nesinkwa, kufanele upheke umhluzi wenkomo yemifino kancane kancane (faka isitashi esincane se-tapioca emhluzweni) kuyoba ngcono kakhulu.
Xem Thêm Các cách bảo quản cua biển sống, cua đồng và cua hoàng đế đơn giản | Muasalebang
Nokia Lumia 920 chính hãng | Muasalebang
30++ Câu chúc mừng sinh nhật tiếng anh ngắn gọn | Muasalebang